သင့်ရဲ့ Zend PHP ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်မည်သို့ – တေလာ Lopes ツဘလော့
စိတ်ကူးအားသာချက်များအကြောင်းပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါ (သို့မဟုတ်မ) တစ်ဦးလက်မှတ်ရှိခြင်း. ကိုယ့်ကိုငါ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်, သောဤခရီး၌နေသောသူကိုအခြားသူများကကူညီစေခြင်းငှါ.
သငျသညျရှိစေခြင်းငှါ 10 နှစ်ပေါင်းပရိုဂရမ်မာ, ဒါပေမယ့်လျှင်မညွှန်ကြားလေ့လာမှုစာမေးပွဲ, ဒါဟာမလွန်အလွန်ဖွယ်ရှိသည်. ငါ၏အနှိမ့်ချအမြင်, Zend ဂရုမစိုက်ပါဘူး (ဒါကြောင့်) သငျသညျ program ကိုမည်သို့သိလျှင်; သူမသင် PHP ကိုဘာသာစကား၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိလျှင်သိရန်လိုသည်. မယုံပါဘူး?
# အောက်ပါကုဒ်၏ output ဆိုတာဘာလဲ?
ပဲ့တင်သံ '' 1 '' . (ပုံနှိပ် ''2') + 3;
# အောက်ပါကုဒ်၏ output ဆိုတာဘာလဲ? '' 1 '' ပဲ့တင်သံ . (ပုံနှိပ် ''2') + 3;
# PHP ကိုအောက်ပါ bitwise စစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်ကဘာလဲ?
ပဲ့တင်သံ 1 ^ 2;
# PHP ကိုအောက်ပါ bitwise စစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်ကဘာလဲ? ပဲ့တင်သံ 1 ^ 2;
# သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါ PHP ကို ​​script ကို run. အဘယ်အရာကို output ဖြစ်လိမ့်မည်?
ပဲ့တင်သံ 0x33, '' သောငှက်များပေါ်မှာထိုင် '', 022, '' သစ်ပင်များ။ ';
# သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါ PHP ကို ​​script ကို run. အဘယ်အရာကို output ဖြစ်လိမ့်မည်? 0x33 echo, '' သောငှက်များပေါ်မှာထိုင် '', 022, '' သစ်ပင်များ။ ';
ယခုသူသည်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါသည်? တုံ့ပြန်ချက်ပင်ဖြစ်သည်, လိုအပ်သလို, “214”, “3” အီး “51 ငှက်တို့သည်ပေါ်မှာထိုင် 18 သစ်ပင်များ”. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးပရိုဂရမ်မာတွေဟာအပေါင်းတို့နှင့်လွဲချော်ခဲ့လျှင်, မရစိတ်ပျက်အားငယ်ပြုပါ :''(
အဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်းဟုသောင်းကျန်း “ဘယ်သူမှနေ့စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အသုံးပြု“. သင်တစ်ဦး ZCPE ဖြစ်လိုလျှင်, ကောက်ကျစ်ဖြစ်, အဆိုပါ Zend သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရာပေါ်အာရုံစိုက်, နှင့်အမှတ်!
စာမေးပွဲဖြတ်သန်းအလွန်ကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်ပင်ပိုကောင်းလေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းလေ့လာသင်ယူနေသည်ကားအဘယ်သို့. ထိုအခါ, ယခုအချိန်တွင်ကိုခံစား! ရုပ်ရှင်မမြင်စဖူးသူမည်သူမဆို “ဘဝကပါဝါထက် ကျော်လွန်.” သငျသညျငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုငါတို့သိကြ၏: “ပျော်ရွှင်မှုခရီးမဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်“.
ကောင်စီ + အရေးကြီးသော
ငါသည်ဤ post ကိုဖွင့်မျှတမှုများနှင့်တစ်ဦးတည်းသာအကြံပေးရကြ၏ အကယ်., လို: simulated အောင်. ဒါပေမယ့်အများကြီးအတူတူပြုပါ!!
သိသာထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းလေ့လာသင်ယူဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းရှိပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအဆင်သင့်ဖော်မြူလာရှိပါသည်. ငါ့ကိုညာဘက်အောက်ပါပေးခဲ့တယ်:
စာအုပ်များ & သတင်းရင်းမြစ်
– Zend PHP ကို5လက်မှတ်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်: တစ်? php[ဗိသုကာ] လမ်းညွှန်, Davey Shafik et al အားဖြင့်. (အင်္ဂလိပ်)
– Zend Certified Engineer အ PHP ကိုလက်မှတ် Descomplicando, Matheus Marabesi နှင့်မိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလပ် (Português)
– တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ PHP ကို
အဲဒီနှစျခုစာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်ပါ. စေ့စေ့စပ်စပ်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သလား. ပထမဦးဆုံးအပေးအယူအတွက်, ဘောပင်နှင့်အတူအရေးကြီးသောအချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသွားပါ; ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်. အဆိုပါတရားဝင်ဆိုက်ကို PHP ကိုဖိုရမ်များပေါ်နှင့်အင်တာနက်ကိုကျော်မေးခွန်းများကိုမေးပါ.
– အဆိုပါ PHP ကိုလက်မှတ်ဆီသို့ Group မှ join
– simulated တေလာ Lopes (ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ထူထောင် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း)
– simulated စာမေးပွဲ-Labs က
– Zend ဟန်ပြပြုလုပ်ထားသောစာမေးပွဲ
– App ကို Android မှာ Simulado PHP ကို ​​ZCE အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲ
လူထု, စာအုပ်တွေကိုဖတ်သည်ကြီး, ကအသိပညာ solidifies, သို့သော်, simulated ပါဘူးအောင်မြင်မှု၏အာမခံချက်ဖြစ်ပါသည်. simulated ဘူးမှမဆိုအခမဲ့အချိန်ကိုသုံးပါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ 1,2သို့မဟုတ်5အမြန်မေးခွန်းများကို, ဒါပေမဲ့ဒီခြားနားချက်ဖြစ်လိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့. သောနေ့၌သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မျက်နှာကိုဖြစ်ကြောင်းသင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ် :: D
သင် PHP ကိုသို့မဟုတ် REGEX ကုဒ်စမ်းသပ်ဖို့လိုတဲ့အခါငါသိ၏နှင့်ပျင်းရိပု XAMP / WAMP ရုတ်သိမ်းပေးရန်မှပေးသည်? ထိုအခါ, ငါလျင်မြန်စွာစမ်းသပ်မှုလုပ်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုနှငျ့အခြို့မေးခွန်းများကိုအဖြေကိုစစ်ဆေး. ဒါကြောင့်သင်အွန်လိုင်း PHP ကို ​​codes တွေကို run နိုင်ပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်. အလွန်အသုံးဝင်သော!
အွန်လိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း PHP ကိုကုဒ်
အွန်လိုင်း regular expressions ကိုစမ်းသပ်ရန် (REGEX)
အဆိုပါစာမေးပွဲ ZCPE အကြောင်း
သငျသညျပြီးသားအထောက်အထားအင်္ဂလိပ်လိုကြောင်းသိစေခြင်းငှါ, ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းအနည်းဆုံးစာမေးပွဲလုပ်ဆောင်ရန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုရှိရမည်. ဖတ်ရှုနိုင်ပါ, ဗိုလ်မှူးကြီး ok!
ငါဝယ်ယူရန်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်သို့မဟုတ်အချိန်ဇယားကိုစာမေးပွဲဘောက်ချာသို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါကြောင့်ပြီးသားရှင်းပြအင်တာနက်ပေါ်ရှိပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒါပေမယ့်အစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး:
(voucher Register နှင့်ဝယ်ဖို့)
(link ကို Register နှင့် access “စမ်းသပ်စင်တာကိုရှာပါ” စမ်းသပ်မှုရက်စွဲအချိန်စာရင်း)
သင်ပင်စာမေးပွဲလုပ်နေတာစဉ်းစားခဲ့လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုယနေ့ဘောက်ချာကိုဝယ်အကြံပြု, အခုပဲ! ဒါဟာထိုက်သည် 1 တစ်နှစ်နှင့်ဤသင်တစ်ဦးအားငါပေးမည် “ငရဲတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ” လေ့လာမှုများစတင်, အားလုံးအပြီး, ဘယ်သူမှဆုံးရှုံးဖို့လိုလား $195 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
သငျသညျဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် 100% ကိုပြင်ဆင်, ဒါပေမယ့်ယုံကြည်မှု, ဒါဟာဒီလောကထဲကအချည်းနှီးဖြစ်၏. သင် simulated အတွက်ကောင်းစွာလုပ်နေကြတဲ့အခါမှာစာမေးပွဲအချိန်စာရင်းပိုင်ခွင့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်. အဘယ်လို “ကောင်းစွာ”? ငါရိုက်တွေအကြောင်းပြောပါချင်ပါတယ် 90% ကိစ္စများ.
သငျသညျ hit ဖို့လိုအပ်စာမေးပွဲ 70% ရှောက်သွား. အဆိုပါသက်သေရှိပါတယ် 70 အတွက်ဟုမေးခံရဖို့မေးခွန်းများကို 90 မိနစ်, အခြားစကား, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှုန်းနီးပါး 1m30s အချိန်. တိတ်ဆိတ်ပေးသည်, ငါကိုအသုံးပြု 1 အချိန်, ပြီးသားလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှေ့တော်၌ထိုသုံးသပ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား.
အဘယ်အရာကိုပြိုင်ပွဲ၌လဲ? စာမကျြနှာတှငျ Zend အကြောင်းအရာများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်စာမေးပွဲတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်. သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာ, ကအပေါ်ကိုတက်ဆွဲထားမဟုတ်! စစ်တမ်းမေးခွန်းများကို simulated ရဲ့ style ၌ရှိကြ၏. ထိုကွောငျ့, အဆိုပါ simulated အတွက်ကောင်းစွာလုပ်နေ, သငျသညျကောင်းစွာစာမေးပွဲ¡ယို garantizo လိမ့်မည်! သို့သော်အဖြေကိုအလှဆင်မပေး, လေ့လာသင်ယူနှင့်အမှန်တကယ်တိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆရန်ကြိုးစား.
နောက်ဆုံးမှာ, ပြီးနောက် 8 ဒီ Post ကိုအကြောင်းကြားသောအရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဆွေမျိုးလေ့လာမှုလအတွင်း, ယနေ့တွင် (28/03/2017) အဆိုပါစာမေးပွဲနှင့် ZCPE ဖျော်ဖြေ, ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း, ကျွန်မသုံးစွဲ! သိသာထင်ရှားတဲ့သင်ပိုမိုမွှုပျနှံများနှင့်ဝက်အတွင်းသို့မဟုတ်ပင်လျော့နည်းသောအခြိနျကာလကိုဖြတ်နိုင်ပါတယ်, သူ့လက်မှဝင်.
အခြားအကွံဉာဏျရှိမရှိ? အဆိုပါစာမေးပွဲမီနေ့ရက်များဘာမှလေ့လာမပေး! သငျသညျကိုခံစားသောအရာတို့ကိုပြုပါ, ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု, ဂိမ်းပစ်, တစ်ဦးအလင်းလမ်းလျှောက်ယူ, သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat, ဘာပဲ! ဤ "သင့်ရဲ့ဦးနှောက်နေထိုင်ကူညီပေးသည်ကောင်းတဲ့", ရိုက်တဲ့ပြီးရင်မပါဘဲ. အခြားအရာ, ပုံမှန်ထက်ကွဲပြားဘာမှမစားကြဘူး, လိမ့်မည်သောအခြိနျကာလကိုတစ်ဦးပျက်ပြားပေးသည် :'မဖြောင့်ဃ?
အဆိုပါစာမေးပွဲနေ့က D: ထဲမှာ
အဘယ်သူမျှမ D-Day ကို, တစ်ဦး get 30 ယင်းအချိန်ကာလသတ်မှတ်အချိန်မတိုင်မီမိနစ်. သင်ရုံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုလက်မှတ်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူသူတို့ထဲကတဦးတည်း. ငါဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုယူ, အခြားဘာမျှမ! သင်ပင်ကလောင်ယူနိုင်ပါသည်, ဆယ်လူလာ, စောင့်ကြည့်, စာအုပ်များ, စသည်တို့ကို, ဒါပေမယ့်စာမေးပွဲစင်တာလျှောက်လွှာမှာရောက်ရှိလာ, သင်ကမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, အရာအားလုံးအခန်းထဲမှထွက်ထားရှိမည်ပါလိမ့်မည်. သင်ကဧညျ့ကွိုင့်မယ့်တစ်ဦးကလောင်အမည်နဲ့ခြစ်ရာစက္ကူ get, စာမေးပွဲမှကွန်ပျူတာကျော်လွန်, ရှင်းလင်းသော.
ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်, အဲဒီမှာလာပြီ, ငါစာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်အခန်းသို့လမ်းလျှောက်. သူကစိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်တင်းမာနေခဲ့လျှင်ငါမသိ, ဒါပေမယ့် damper နားရွက်ထားရန်, ငါသည်ငါ့နှလုံး၏ရိုက်နှက်မှုကိုနားထောငျဖို့စတင်ခဲ့ kkk :) လက်ဝဲ! ဒါပေမယ့်စာမေးပွဲများ၏သင်တန်းအတွက်လျှော့ပေါ့ခံခဲ့ရသည်, ငါရှိရာ၏တာသဘောပေါက်သောကွောငျ့, ငါသူလုပ်သော simulated ၏ရာပေါင်းများစွာတွင်တွေ့မြင်ခဲ့. E ကို, အဆုံး, printou "ဟုအဆိုပါမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမှာပါတဲ့မတော်တပို့ခကျြမြား".
Zend Certified Engineer အ
client ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ID ကို: ZEND029320
စုစုပေါင်း access: 60111
28 မတ်လ 2017 တေလာ Lopes	php လက်မှတ်, စာမေးပွဲ, PHP ကို, စမ်းသပ်, zcpe, Zend, Zend Certified? php အင်ဂျင်နီယာ
16 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “သင့်ရဲ့ Zend PHP ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်မည်သို့”
Giovanni Portela ကပြောပါတယ်:
ဂုဏ်ယူပါတယ်မြင့်မြတ်သောအဖော်. ငါသည်သင်တို့အထဲတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသိရ. သငျသညျထိုက်.
28 မတ်လ 2017 သို့ 20:47
ကျေးဇူးတင်ပါသည် Portela, နားလည်မှုနှင့်သည်းခံခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :: D ပွေ့ဖက်!
28 မတ်လ 2017 သို့ 21:14
Antonio ဂျူနီယာတစ်ဦးက. Mota ကပြောပါတယ်:
မတော်တပို့ခကျြမြား, တေလာ! မိမိအအောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်. ကျွန်မကိုယ်တွေ့သူတို့ရဲ့အပျနှံကိုမွငျလြှငျ. သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုမျှဝေဖို့ cool. သငျသညျအကြှနျုပျကိုသငျသညျနှငျ့တူသောလူ mirror နြို. ဤသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုသင်ကောင်းသောအသီးကိုဆောင် ခဲ့.. ကြီးမားသောပွေ့ဖက်.
28 မတ်လ 2017 သို့ 22:55
Opa, မာစတာ! ငါဆိုသောစကားကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပြန်အလှန်ကြောင်းကိုငါသိ၏. မိမိအဝတ်စုံကို၏တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းတဲ့ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ပွေ့ဖက်!
29 မတ်လ 2017 သို့ 7:21
Thiago Luis ကပြောပါတယ်:
ငါလက်မှတ်မှလမ်းကြောင်း en ပေါ့.
17 ဧပြီလ 2017 သို့ 20:45
ကံကောင်းပါစေ Thiago, ထိုမှတပါး, ကောင်းသောလေ့လာမှု! အရာအားလုံးဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်, ယုံကြည်မှု, ရရှိခဲ့သည်…
18 ဧပြီလ 2017 သို့ 20:48
Edson Luiz da Silva ဂျူနီယာ ကပြောပါတယ်:
ငါသည်သင်တို့၏ပို့စ်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်, ယနေ့ငါမျှော်မှန်းဂုဏ်ယူပါတယ်လက်ခံရရှိ. သင်က link ပြုကျန်ရစ် Simulated, သူသည်ငါ၏ပြင်ဆင်မှု၌ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်သောတစျခုဖွစျသညျ. သင့်ရဲ့ပဏာမခြေလှမ်းအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
22 ဇွန်လ 2017 သို့ 22:03
Opa, ကြောင်းဥပဒေရေးရာ!! မတော်တပို့ခကျြမြား, Edson… ငါကနားမထောင်ဖို့ဝမ်းသာတယ်, တကယ်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်. ပွေ့ဖက်!
22 ဇွန်လ 2017 သို့ 22:57
Vinicius Dias ကပြောပါတယ်:
လမ်း, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. မိမိအ simulated, အများအားဖြင့်, ဒါဟာငါ့အအောင်လက်မှတ်ရဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်!
ငါအစွန်အဖျားများအတွက်မေးရန်ဒီနေရာကိုသင်ယူ… သင်မည်သို့ကြောင်းရှုမြင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် / သို့မဟုတ် LinkedIn တို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်?
27 ဇူလိုင်လ 2017 သို့ 16:15
Opa, ပြီးတော့ Vinicius, မတော်တပို့ခကျြမြား!!
ကြည့်ရှု, လက်မှတ်ထုတ်ဝြေခင်းအကြောင်းကိုပဲဒီအတိုင်းလိုက်နာ LinkedIn တို့မှစည်း.
တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ထို, ပွေ့ဖက်!
27 ဇူလိုင်လ 2017 သို့ 22:40
မင်းအဲဒီလိုထင်လား3လများ(ကနေလေ့လာနေ 30 mina1 တစ်ရက်နာရီ,7တစ်ပါတ်ရက်ပေါင်း) လက်မှတ်ရရှိရန်လုံလောက်သောဖြစ်ကြသည် ?
8 ဇန္နဝါရီလ 2018 သို့ 6:23
က, ကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ် 8 လများ, ဒါပေမယ့်လျော့နည်းပါပြီနိုင်ဘူး. ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဆုံးရှုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သေချာအောင်ချင်တယ်.
သင်ကဖြတ်လမ်းချင်လျှင်, simulated အောင် (အတော်များများ!!). ဒါပေမယ့်ငါပြထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ယူခြင်းကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထက်ပိုကောင်းတယ်.
16 ဇန္နဝါရီလ 2018 သို့ 21:10
ငါကျေးဇူးတင်မှဖြတ်သန်းတာပါ. ဒီနေ့စာမေးပွဲကိုခံခဲ့တယ် (02/06/2020) မွန်းလွဲပိုင်း၌ငါအများကြီးလိုချင်တယ်တယ် “ဂုဏ်ယူပါတယ်!”. သင်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်သင်တည်ဆောက်ခဲ့သောပုံရိပ်ကကျွန်ုပ်ကိုထောက်ခံမှုရရန်များစွာကူညီခဲ့သည်. ငါယူတယ်5နှင့်ခွင့်ပြုချက်ရရန်တစ်နှစ်ခွဲ.
ငါအွန်လိုင်းနှင့်အိမ်မှစမ်းသပ်မှုကိုယူ, ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သည်. ထံမှပို 1 နိုဝင်ဘာလ 2019, Person Vue သည် webcam ရှိရုံဖြင့်အွန်လိုင်းစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုခွင့်ပြုသည်.
နောက်အဆင့်မှာ Laravel နှင့် AWS Solutions Architect ၏အောင်လက်မှတ်များဖြစ်သည်.
client ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ID ကို: ZEND032378
2 ဇွန်လ 2020 သို့ 18:12
သင်၏နောက်မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်းမကြာမီရောက်ရှိနိုင်ပါစေ. ထိုမှတပါး, အရမ်းကောင်းတယ်!
19 ဇူလိုင်လ 2020 သို့ 17:52
Thiago Bueno Fiorenza ကပြောပါတယ်:
ငါကဘယ်လို link ကိုအဝါရောင်စာမျက်နှာပုံသွင်းထားကြဘူး?
23 ဧပြီလ 2019 သို့ 14:19
log in ဝင်ရန် http://www.zend.com/en/user/login
My Zend အကောင့်အချက်အလက်ကိုရွေးချယ်ပါ
ZCE link ကိုနှိပ်ပါ
စာမျက်နှာကိုအဆုံးသို့ scroll လုပ်ပါ
9 ဇွန်လ 2019 သို့ 14:54
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.474.966 ဝင်ရောက်ခွင့်